Zvatinoita - Shenzhen Sunson International Logistics Co., Ltd.
tinopa vatengi vedu zvakanakisa muCommerce kurongeka kuzadzikiswa kubva kuChina kuenda kuNyika Yese…
Kuzadzikiswa kuri pamusoro peanopfuura ekutumira maodha kune ako vatengi. Izvo ndezve kugadzira yekutanga kirasi kutenga ruzivo iyo inosiya inogara inoratidzika, iyo inovimbisa vatengi vako kuti varambe vachidzoka kuzora zvakare uye zvakare. Ndipo patinogona kubatsira!
Chiitiko:Isu tine ruzivo nekumisikidza maitiro anodikanwa ekuzadzikiswa kwako kwekupedzisira muB2B uye B2C nhungamiro. Isu tinoziva akanakisa maitiro mune ino ndima anogona kubatsira iwe. Isu tine anoshanda akasimbiswa maitiro, zvishandiso, uye vakanyatsodzidziswa vashandi kuti vabate zvakachengeteka, zvinobudirira uye nenzira inonyanya kuvimbisa. Zvivakwa zvedu ndezvepamusoro-soro zviyero zvine yakanakisa yekugadzirisa nguva dzose nekutarisa-kuona, kudzora mhando uye kuongorora. Vashandi vedu vakanyatsodzidziswa kuchengetedza aya matanho nguva dzose.
Sisitimu:Isu tinopa inodhura uye isingadhuri mhinduro yekuchengetedza inoshanda nguva yekugadzirisa mupfungwa. Nekuvaka maitiro edu uye masevhisi akatenderedza bhizinesi rako, tinogona kukuchengetedza nguva, mari uye zvese zvaizobatwa zvakachengeteka uye kunetswa mahara. Yedu-mumba sisitimu yakagadzirirwa mutengi yakanangana uye iri nyore uye inonzwisisika kune yako online yekutengesa ngarava, ichikubvumidza iwe kuti uchengetedze yako wega hesheni uye maodha kure. Unogona kugara uchiona masheya ako chero kupi, chero nguva, zvakachengeteka pasina njodzi yekutarisa. Sunson yekumberi-kumagumo webhu-based interface yakanyatsobatanidzwa needu kumashure-kumagumo kutora-uye-kurongedza mashandiro. Isu tinoshandisa barcode tekinoroji padanho rega rega.
Kuchengetedza:Isu tine anopfuura 10,000 sq. Metres imba yekuchengetera muShenzhen uye Guangzhou yePurovhinzi yedunhu, muChina. Zvigadzirwa zvinochengetwa nenzira yakarongeka. Isu nekushandisa kwakanaka kwenzvimbo yekuchengetera nzvimbo inochengeterwa kubatsira mukubata kubata. Zvinhu zvinodhura zvinochengetwa zvakasiyana. Imba yedu yekuchengetera zvakare yakagadzirirwa nemagetsi ekudzvinyirira masisitimu pamwe nemaawa makumi maviri nemana ekucherechedza. Isu zvakare tine mukana unodzorwa wekuona kuchengetedzeka kwezvigadzirwa zvako.
DZIMBA:Imba yedu yekuchengetera muChina inokutendera iwe kutora zvakanakira yemutengo wakaderera wekushandisa uye dzakawanda nzira dzekuendesa. Ikoko kwaizovezve nekugona kwemabhenefiti sekutengesa mutero kudzikisira uye kudzivirira mabasa. Isu tinogona zvakare kubatsira kutaura neako maChinese vatengesi.
Sarudza-uye-Rongedza:Isu tinobata makumi matatu ezviuru maodha mazuva ese uye nekwaniso yemamirioni 100,000+ panguva yepamusoro mwaka. Tine nguva yekukurumidza kutendeuka. Kazhinji, odha dzinotumirwa pakati pa10: 00 - 20: 00 dzakagadzirira kuunganidzwa nekutakura mukati maawa makumi maviri nemana. Isu mukutora-uye-kurongedza tiri kushandisa yekutanga-mu-yekutanga-kunze system, saka vatengi vako vanovimbiswa kuti vagamuchire zvigadzirwa zvavo mune zvakakwana mamiriro. Isu tinopa mahara emahara ekuzadza zvinhu zvekuwedzera kudzivirirwa kubva kukuvara panguva yekutumirwa kwenyika dzese. Isu tinoshandisa barcode tekinoroji padanho rega rega. Mapakeji anoyerwa otomatiki kuti ave nechokwadi chekutakura kwechaji. Muchokwadi, tekinoroji ndiyo kiyi yedu mukuderedza mutengo, kugadzirisa mashandiro uye kudzikisira kukanganisa kwevanhu.
Kutumira:Mapakeji akarongwa achishandisa michina yedu uye anogara achitariswa kaviri asati aendesa kunze. Ruzivo rwedu rwekutumira kwenyika dzese kunoita kuti tikwanise kusevha iwe mari pamwe nenguva. Iwe uchave uine yakanyanya mari mari yekuendesa sarudzo iripo nekuti sunson anga achidyidzana nenyika-inotungamira inotakura vatakuri seUPS, DHL, EMS, nezvimwewo pamwe neyepasirese mabasa eposvo seNetherlands Post, Hong Kong Post, China Post, USPS, Swiss Post , Royal Mail, Belgium Post, nezvimwewo Tinewo akatsaurwa emasevhisi masevhisi, ayo anosanganiswa neEuropean vatakuri kutarisira yekupedzisira mamaira ekutakura. Tora mukana wezvedu zvakaderera kutumira mitengo zvatakatotaurirana nevatengesi vakavimbika! Kana iwe uri kunze kweChina uye iwe uri kutengesa Yakagadzirwa-mu-China zvigadzirwa kumusika wepasirese, ipapo isu tinogona kukubatsira iwe nekutumira odha kubva kuChina kuenda kune ako vatengi chero kupi kutenderera pasirese.
Vatengi:sunson ane ruzivo rwakakura mukushanda nevatengi vekunze vane zvigadzirwa zvakawanikwa kubva kuChina. Sezvatinoziva, vazhinji vevatengesi vepamhepo ndevekunze; isu takagadzira yakasarudzika bhizinesi modhi iyo inogarisa edu ese ari kure mutengi uye ichivatendera ivo kubata zvese zviri online. Kana iwe uchida kuzadzikiswa kunotaura zvisina mushe neako e-commerce yekutengera ngoro, saka tinogona kukurukura newe kuti ugadzirise maitiro aya kuburikidza nekubatanidzwa kweAPI. Tichaita kuti zvive nyore kumhanyisa imba yekuchengetera yeChina kubva mhiri kwemakungwa.
Kutsigira:Tine hunyanzvi vanotaura chiRungu maAccount maManeja Vatengi Vamiririri Vamiririri avo vanogara vachigoverwa kune wega wega akanyoreswa mutengi kuti zvive zvakanak
Iwo ekuzadzisa masevhisi auchange uchikunda pano, sunson anozvidavirira uye zvinoratidzwa kune edu ese zvipikirwa. Iwe unogona kubvisa nguva yakashandiswa pakubhadhara maitiro, kudzidzisa uye kutarisira tsvimbo dzekutakura kana iwe ukabatana nesu. Kuzviita iwe pachako hazvisi nyore, isu tiri pano nekuda kwako. Tinokuitira iwe, zvakachengeteka uye zvinoenderana nenguva. Kunetseka kwako hakusipo. Yedu yekuzadzikisa nzvimbo ndizvo zvaunoda kuti bhizinesi rako riende padanho rinotevera, rinovimbisa repasirese.
Tinokukurudzira kutyaira kutengesa uye isu tichagadzirisa kurongedza, kutumira kwako. Iwe unongotarisa pane zvaunoita zvakanyanya. Iwo ekuzadzisa masevhisi iwe aunowana kubva kuna sunson akachengeteka, anozvidavirira uye akanakisa kuratidzwa. Iwe uchabvisa nguva yakashandiswa pakubhadhara, kudzidzisa uye kutarisira vashandi vekutakura kana kuzviita iwe pachako zvakare kwakanyanya kuoma. Yedu yekuzadzikisa nzvimbo ndizvo zvaunoda kuti uwane bhizinesi rako kune rinotevera danho.